"Lu Ming Ju" sisikhululo sikaloliwe esinesantya esiphezulu, igumbi lokudlala labantwana, kunye netafile ezenzekelayo yemahjong xa uphuma. Ixhotyiswe ngegumbi eliwele. Ifenitshala enyuswe ngokupheleleyo, i-150 square metres yokukhanya obutofotofo obukhulu obunamagumbi okulala amathathu. - I-Airbnb
"Lu Ming Ju" sisikhululo sikaloliwe esinesantya esiphezulu, igumbi lokudlala labantwana, kunye netafile ezenzekelayo yemahjong xa uphuma. Ixhotyiswe ngegumbi eliwele. Ifenitshala enyuswe ngokupheleleyo, i-150 square metres yokukhanya obutofotofo obukhulu obunamagumbi okulala amathathu.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu鹿鸣居
ILumingju B&B ibekwe kufutshane neSikhululo saseZhangjiakou, iLvyuan Community, uhambo lwemizuzu elishumi ukuya esitishini, kunye nezixhobo ezijikelezileyo ezipheleleyo kunye nohambo olulula. Igumbi linamagumbi okulala amathathu, iiholo ezimbini kunye negumbi lokuhlambela ezimbini, ezigubungela indawo ye-147 square metres. Eli gumbi lineebhedi ezimbini ezinkulu eziziimitha eziyi-1.8, iibhedi ezimbini eziziimitha ezi-1.1 zabantu abangabodwa, kunye namagumbi okuhlambela amabini. Izixhobo zasekhitshini ziyafumaneka ukulungiselela ukupheka okulula. Isofa yeLatex kwigumbi lokuhlala, imbonakalo yescreen esikhulu, ibalcony enekona yokonwabisa abazali nabantwana, itafile yokwakha, abantwana abaza kudlala. Kukho netafile ye-Mahjong ezenzekelayo yokudlala.
147 square metres, amagumbi okulala amathathu, umatshini we-mahjong ozenzekelayo, iprojektha, itafile yokwakha umzali-umntwana, oonogada abaphindwe kabini.
Indawo ezingqongileyo: imarike yemifuno, ivenkile eluncedo, ikhemesti, indawo yokutyela, isikhululo sebhasi, isikhululo esimgama omde, isikhululo sikaloliwe esinesantya esiphezulu.
Umbuki zindwendwe ngu- 鹿鸣居
Ngexesha lokuhlala, unokuqhagamshelana neendwendwe nangaliphi na ixesha ukubonelela ngolwazi malunga nokujikeleza kwendlu, ukuhamba kwendawo, kunye neenkonzo zokucebisa ukutya.